Goto Ujoliso kwiHolide eNgcono / Isilwanyana sasekhaya / iSebenzisa iqela laBucala kwiVilla ARAGI
Aridagawa, Arida District, Wakayama, Japan
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPrivate Villa ARAGI
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uPrivate Villa ARAGI iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yaseNtshona erentwayo enezitena ezibomvu emi ecaleni komlambo ojikelezwe buhlaza kwidolophu yaseAridagawa, kwiSithili saseWakayama.
Indawo engqongileyo izolile kwaye unokuva isandi somoya kunye nesikhalo sezilwanyana zasendle kumgama ekumbombozeleni komlambo. Unokusibona isibhakabhaka esineenkwenkwezi ngobusuku obunelanga.
Malunga nemizuzu engama-35 ngemoto usuka e-Arida IC, kukwakho nendawo ebukekayo i-"Aragijima", eyenye yamasimi erayisi ayi-100 agqwesileyo, kunye ne-"Shimizu Onsen", eyindawo eshushu yealkaline.
Nceda uyisebenzise kwiindibano ezahlukeneyo ezinje ngeeholide nosapho kunye nabahlobo, njengendawo yoqeqesho, kunye nokuhamba nabahlobo bezilwanyana zasekhaya.
Isetyenziselwa kuphela iqela elinye ngosuku. Unokuphumla ngokukhululekileyo kunye nenja yakho kwindawo okanye kwigumbi leendwendwe. Abasebenzi baya kuphendula ngokuthe ngqo, ngoko ke ukuba unayo nayiphi na ingxaki, siya kuphendula ngokukhawuleza.
● Ngeendibano kunye nabahlobo, iinkampu zeesemina, imibutho yabafundi, njl.
● Kwiindibano zezalamane, uhambo lwentsapho, imibhiyozo yamaxesha amandulo, imibhiyozo yokuzalwa engama-60, njl.
● Kuqeqesho neenkampu zoqeqesho kwinkampani
● Ngokuhamba nenja yakho
Ungapaka ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-3 eziqhelekileyo kwindawo yokupaka.
Yindlu yokurenta esingathanda ukuba uyindwendwele ngenjongo "yokuhlala apha".
Nceda ujonge "Amanye amanqaku" ngeenkcukacha zesicwangciso kunye nezixhobo.
Yindlu entle yokurenta emalunga ne-200 square metres engqongwe yindalo entle.
Ikhitshi eliphangaleleyo / igumbi lokuhlala linendawo yokutyela eyenziweyo kwibalcony kumgangatho wesibini. Kukho iindidi ezimbini zamagumbi okulala, enye yindawo yokulala yentlanzi encinci kwaye enye iyigumbi lohlobo lwebhedi elinendawo ephezulu, enokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo. Ungabukela iimuvi ngokufunwa kangangoko ufuna, ke uya kuhlala kude kube sebusuku ngokungazithandiyo.
Zama ukugubha kwi-hammock kwi-balcony.
Iya kuba lixesha elingaqhelekanga lokuchitha ixesha lokumamela izandi zendalo kwaye ubukele imbonakalo yendalo.
Ngokuhlwa, yonwabela izitya ezifana ne-BBQ ngokuchasene nomva weentaba ezidaywe kukutshona kwelanga okuhle.
Check-in ixesha kangangoko bhetyebhetye kangangoko kunokwenzeka, ukuze ukwazi ukufika ngexesha lesidlo sasemini, axhamle zeBBQ sasemini, yiya ngumthombo ekufutshane shushu ebusuku, ibhodi yokudlala imidlalo emva kokubuyela ekhaya, uze ubukele nesibhakabhaka esimnyama. Ungakhetha indlela yokonwaba yona.
Kukho nebhafu kwisakhiwo, kodwa qiniseka ukutyelela i-Shimizu Onsen, eyi-5-minute drive away. Nangona incinci, yindawo entle eshushu eshushu egcwele amanzi ashushu kunye nevumba lenkuni.
Ukuqhuba okufutshane ukuya kwindawo yokujonga "Aragijima", enye yezona ndawo zibalaseleyo zerayisi ezili-100 eJapan!
Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-6, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
55" TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Fire TV, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.91 ·Izimvo eziyi-66
4.91 · Izimvo eziyi-66
Indawo ejikelezileyo igcwele indalo. Ezi zilandelayo ziindawo ezicetyiswayo ebumelwaneni.
Ialkaline ebuthathaka "Shimizu Onsen"
→ imizuzu emi-5 ngemoto
I-100 ekhethiweyo yeendawo zerayisi eJapan "Isiqithi saseAragi"
→ imizuzu emi-3 ngemoto
Kuyavuyisa, ibhulorho yokunqunyanyiswa eyi-160m ende "iZao Bridge"
→ imizuzu eli-10 ngemoto
Ukubamba iintlanzi "Toi Campsite"
Ukudlala emlanjeni "Fureai no Oka Campsite"
Isikali esinamandla "idama leFutagawa"
→ imizuzu eli-15 ngemoto
Isiliphu sexesha "uMhlaba weDinosaur" kumaxesha amandulo
→ imizuzu engama-20 ngemoto
Yonwabela ukutya kwaselwandle "indawo yaseYuasa"
→ imizuzu engama-40 ngemoto
Indawo yokuphumla ethafeni "Ikishi Kogen" ilungele iimbono zasebusuku kunye nokujonga isibhakabhaka esineenkwenkwezi
→ imizuzu engama-30 ngemoto
Amava e-ranch "i-Kurosawa ranch" kunye nokugijima kwenja
→ imizuzu engama-45 ngemoto
Ilifa lehlabathi "Mt. Koya"
→ imizuzu engama-60 ngemoto
"Shirahama Adventure World" apho unokudibana neepanda
→ imizuzu engama-90 ngemoto
Umbuki zindwendwe ngu- Private Villa ARAGI
こんにちは｡ 和歌山県有田川町の貸別荘｢Private Villa ARAGI｣です｡ ﾎｽﾄとｽﾀｯﾌは旅行と犬が大好きなので､愛犬とゆっくり過ごせる宿を作りました｡ 大人数での宿泊も大歓迎です｡少し街からは離れていますが､大自然の中での非日常を味わいに遊びに来てみてはいかがでしょうか? 皆様のお越しを心からお待ちしています!!
Ngexesha lokuhlala kwakho, abasebenzi baya kubekwa kwigumbi labasebenzi ehotele.
Indawo yeendwendwe kunye nendawo yabasebenzi yohlulwe ngokupheleleyo.
Unokuqiniseka ukuba abasebenzi baya kuphendula ngokukhawuleza ukuba kuyimfuneko.
Siza kuphendula ubuso ngobuso ekungeneni nasekuphumeni.
Inombolo yomthetho: M300022431